काँग्रेस जति चिच्याउँछ, विकासले त्यत्ति नै फड्को मार्छः मन्त्री आङ्बो « Mechipost.com
काँग्रेस जति चिच्याउँछ, विकासले त्यत्ति नै फड्को मार्छः मन्त्री आङ्बो
प्रकाशित मिति: ५ मंसिर २०७६, बिहीबार १८:५१
आङसराङ, ५ मंसिर
प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’ले नेपाली काँग्रेसले विकास विरोधी कार्य गरेको वताउनुभएको छ ।
विकासको विरोध गरेर काँग्रेसले जनतालाई अध्याँरोमा राख्ने प्रयत्न गरेको वताउँदै उहाँले जनताले उज्यालोको पक्ष लिने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । विकासको विरोध गरेर काँग्रेस चिच्याइरहेको वताउँदै उहाँले काँग्रेस जति चिच्यायो, त्यत्ति नै विकासले फड्को मार्ने वताउनुभयो ।
“जसरी स्कुल खोल्दा राणा शासन अन्त्य हुन्छ भनेर विगतमा राणाहरुले बुझ्थे, त्यसरी नै विकास गर्दा सबै जनता कम्युनिष्ट हुन्छन भन्ने काँग्रेसले बुझेको छ” पाँचथरको फाल्गुनन्द गाँउपालिका वडा नं. ७ आङसराङमा आयोजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आमसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो “काँग्रेसले जति धेरै विरोध ग¥यो नेपालमा त्यत्ति धेरै विकास हुन्छ ।”
प्रतिनिधिसभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङ संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नियुक्त हुनुभएकाले अब पाँचथरमा संघ र प्रदेशले विकासको मुल फुटाउने मन्त्री आङ्बोको भनाई छ । विकासका लागि तीनै तहको सहकार्य हुनुपर्ने भएकाले स्थानीय तहमा समेत नेकपाको नेतृत्व आवश्यक रहेको उहाँको ठम्याई छ ।
उक्त कार्यक्रमलाई फाल्गुनन्द गाँउपालिकामा आगामी मंसिर १४ गते हुन लागेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार वीरबहादुर कुरुम्बाङ सहित नेकपाका नेताले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । काँर्यक्रममा ५० जनाभन्दा बढी स्थानीयवासी नेपाली काँग्रेस, समाजवादी पार्टी र राप्रपा परित्याग गरी नेकपामा प्रवेश गर्नुभएको थियो ।
तल प्रस्तुत छ, मन्त्री आङ्बोको सम्बोधनका केही अंशहरुः–
आज पाँचथरका लागि सबैभन्दा खुसीको दिन हो । हामीले नै निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङ मुलुककै विकासको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयको मन्त्री हुनुभएको छ । समग्र देशकै विकासको अगुवाई यो मन्त्रालयले गर्छ । उहाँलाई विराटनगरबाट विदाई गरेर म यहाँ आएको छु । म फाल्गुनन्द तिर, उहाँ काठमाण्डौँ तिर लाग्यौँ । उहाँले मन्त्रालय सम्हालिसक्नु भएको छ । हामी पाँचथरे, हामी फाल्गुनन्दवासी विकासप्रेमीका निम्ति साह्रै खुसीको दिन हो ।
अनि हाम्रा एकथरी लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको कुरा गरेर कहिल्यै पनि नथाक्ने तथाकथित लोकतन्त्रवादीहरुको आज असाध्यै दुःखको दिन भएको छ । किनभने उहाँहरु विकास विरोधी हुनुहुन्छ । मैले यहाँ विकासको कुरा गरेँभने उहाँहरु बेलुका आँटी नआँटी आचारसंहिता मिच्यो भनेर फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ । अब वसन्तकुमार नेम्वाङ झन विकास निर्माण गर्ने मन्त्रालयकै मन्त्री हुनुभएको छ । अब केन्द्रले नै पो आचारसंहिता मिच्यो भनेर भरे लेख्नुहुन्छ कि । किनकी उहाँहरुलाई विकास गर्ने कुरासँग डर लाग्छ ।
तपाईँहरुलाई थाहा छ उहिल्यै राणा कालमा स्कुल, बाटो, विजुली बनायो दियो भने जनता बाठा हुन्छन् र राणा शासनको विरुद्धमा संघर्ष गर्छन् र जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य हुन्छ, प्रजातन्त्रको उदय हुन्छ भनेर राणाहरुले स्कुल खोल्न दिँदैनथे । आजभोली त्यही राणाकै पालामा बनेको पार्टी छ । त्यही पार्टीका साथीहरु विकासको कुरा ग¥यो भने यो त झुक्याएको, ढाँटेको, भोट मागेको, आचारसंहिता मिचेको, विकास हुँदै होइन् भनेर पुरै आपत्ति विपत्ति गरेर हिँड्नुहुन्छ । विकासको भण्डाफोर गर्नुहुन्छ ।
यसपाली फाल्गुनन्दको निर्वाचनमा फाल्गुनन्दको जनताले विकासको पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ वा विकास विरोधीको पक्षमा गर्नुहुन्छ यहाँहरु त्यसको परीक्षा सुरु भएको छ । मलाई विश्वास छ जनताले उज्यालोको पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ ।
बाटो खन्छु भन्यो भने पनि त्यसको विरोध गर्ने, खानेपानी दिन्छु भन्यो भने पनि त्यसको विरोध गर्ने, खेलमैदान बनाउँछु भन्यो भने त्यसको पनि विरोध गर्ने, अनि विद्युतिकरण गर्छौँ भन्यो भने त्यसको विरोध गर्ने । अनि ७ वटा होइन् ४० वटा विद्यालयमा भाषा शिक्षा पढाउँछौँ भन्दा त्यसको विरोध गर्ने ।
जसरी स्कुल खोल्दा राणा शासन अन्त्य हुन्छ भनेर राणाहरुले बुझ्थे, त्यसरी नै विकास गर्दा सबै जनता कम्युनिष्ट हुन्छन भन्ने काँग्रेसले बुझेको छ । काँग्रेसले जति धेरै विरोध ग¥यो नेपालमा त्यत्ति धेरै विकास हुन्छ । किनकी यो सरकार विकास गर्न बनेको सरकार हो । अध्याँरोमा राखेर, जनताको आँखामा कालोपट्टी बाँधेर, जनतालाई दुःखमा राखेर आफूचाँही घोडामा सवार भएर जसरी हिँजोका शासकहरुले, सामन्तहरुले शासन गर्थे, त्यो दिन अन्त्य भइसकेको छ ।
नेपालमा संघीयमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ । यो जनताको शासन हो । जनताको शासनमा जनताको हितका निम्ति जनताको विकासका निम्ति शासन प्रशासन चल्छ । यसमा काँग्रेसले जति आपत्ति गरेपनि केही अर्थ छैन् । काँग्रेसलाई जनताले रछ्यानमा फालिसकेका छन् । भनिन्छ मरिसकेको सुंगुरलाई जुम्राले पनि छाड्छ रे । मलाई लाग्छ हारिसकेको काँग्रेसलाई जुम्राले पनि छाडिसकेको छ । जुम्राले छोडिसकेको काँग्रेस चिच्याइरहेको छ, विकासको नाममा आचारसंहिता मिचिँदैछ, भाषा शिक्षा दिन्छु भनेर मन्त्रीले आचारसंहिता मिचिँदैछ । काँग्रेसले जति चिच्याउँछ, त्यत्ति विकास हुन्छ । काँग्रेस जति तड्पीन्छ, जनता त्यति धेरै खुसी हुन्छन् । त्यो दिन आइसकेको छ । यो निर्वाचन विकासको पक्षमा रहेको नेकपा र राणा शासनमा राख्ने काँग्रेसको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
हामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लड्दैगर्दा पाँचथरमा मेची राजमार्ग र पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग बाहेक एक मिटर पनि कालोपत्रे थिएन् । हामीले चुनावमा भनेका थियौँ पाँचथर वर्षमा पाँच वर्षमा ५ सय किलोमिटर बाटो बनाउँदैछौँ । त्यसको सुरुआत भएको छ । काँग्रेसले यो जनविरोधी काम भनेर चिच्याउला ।
हामी यस्तो भाग्यमानी जिल्ला हो जसमा देशका ४० पूर्ण विद्युतिकरण हुने जिल्लामा प¥यौँ । अबको तीन वर्षमा पाँचथरको कुनैपनि कुनाकाप्चामा टुकी बाल्नुपर्ने छैन्, सबैतिर बत्ती बल्छ । त्यो काम सरकारले थालिसकेको छ । आउँदो वर्ष १५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छौँ । गत वर्ष मात्रै हामीले ११ अर्बको विजुली बेच्यौँ ।
खानेपानी जनताको मौलिक हक हो । पाँचथरमा लिफ्टिङ र अन्य योजना अघि बढ्दैछ । यही वर्ष यासोकमा तमोरको पानी खसाल्छौँ । यही वर्ष मौवा डाँडामा पनि पानी खसाल्ने प्रयत्न भइरहेको छ । दुई वर्षभित्र निवुखोलाबाट नवमीडाँडा र लुम्फाबुङमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउछौँ । आङसराङका सबै घरमा तीन वर्षभित्र एक घर एक खानेपानी धारा पुग्छ । पाँच वर्षमा जिल्लाका सबै घरमा खानेपानीको धारा पु¥याउछौँ ।
काँग्रेस चुनाव आएपछि विजुलीको पोल, तार, खानेपानी पाइप बाँढ्छ । अबको तीन वर्षमा सबै घरमा विद्युत, खानेपानी पुगेको हुन्छ । कसैले बोकेर ल्याउनु पर्दैन् । अनि काँग्रेसको विजुलीको पोल, तार, खानेपानी पाइप बाँढेर भोट माग्ने दिन सकिन्छ । अहिले चामल र ब्ल्याङ्केट बाँढिदैछ रे । अब जनतालाई आफैँ उत्पादन गर्न सक्ने वनाउछौँ । अनि काँग्रेसले कसलाई बाँढ्ने ?
सरकारकै पहलमा कम्तिमा २० खर्व लगानी भित्रिने भएको छ । पञ्चले पनि नबेचेको, नखाएको उद्योग धन्दा कल कारखाना निजीकरण र खुला अर्थतन्त्रको नाममा काँग्रेसले बेचेर खायो । भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला उद्योग, चोभारमा रहेको सिमेन्ट कारखाना लगायत २५÷३० वटा उद्योग धन्दा बेचिए । तर आज सरकारले उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्ने वातावरण बनाएको छ । ५ हजार उद्योग धन्दा दर्ता भई निर्माणमा सुरु भएको छ । नेपाल अब आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढेको छ ।
काँग्रेसको गलत अर्थनीति र प्रणालीले हजारौँ युवा विदेश जानु परेको छ । काँग्रेसले कौडीको भाउमा उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेपछि युवाहरु विदेश नगएर कहाँ जाने ? खेतीयोग्य जमिन बाँझिने स्थिति, कृषि उपज नविकेपछि युवाहरु कहाँ जान्छन् त ? सरकारले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, पूर्वाधारका आयोजनाहरु, युवा उद्यमशीलताका योजनाहरु सुरु भइसकेका छन् । यो सरकारले साढे तीन वर्षमा युवा विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नेछ ।
अब चीनसँग जोड्ने आठ वटा सडक बन्नेछन् । पारवहन सम्झौताले अन्य मुलुकसम्म नेपाली सामान वेच्ने अवसर मिल्नेछ । विद्युत बेच्न भारत, चीन, बङ्गलादेशसँग सम्झौता भइसक्यो । पाँचथरमा विकासले फड्को मार्दैछ । फिदिमबाट यासोक, यासोकबाट उत्तरेसम्म अब बाटो कालोपत्रे हुन्छ । उहिल्यैदेखि ढाँटिएको राँके–रबी–भेडेटार सडक तीन वर्षमा कालोपत्रे बन्ने निश्चित भएको सबैले देखेकै छौँ । दमक–रबी सडक निर्माणको ठेक्का लागेको छ । विराटनगर–किमाथाङ्का जोड्ने तमोर कोरिडोर तीन वर्षमा कालोपत्रे भइसक्छ ।
फिदिम–यासोक–मौवा–छ नम्बर बुधबारे सडक कालोपत्रेको काम यही साल सुरु हुन्छ, अहिले डिटेल सर्बे चलिरहेको । साम्दिन–नवमीडाँडा कालोपत्रेको अन्तिम चरणमा छ । नवमीडाँडा–घुर्विसेपञ्चमीसम्म कालोपत्रेको काम सुरु गर्छौँ । गुम्बाडाँडादेखि पात्लेभञ्ज्याङसम्म, कान्छीदोकानदेखि पात्लेभञ्ज्याङ हुँदै सिवादोभानसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य पनि सुरु भइसकेको छ ।
उत्तरमा पनि काम भइरहेको छ । फिदिम–फालोट र फिदिम–सन्दकपुर सडकको काम समेत अघि बढिसकेको छ । सिङ्गै जिल्लामा सिंचाई, विद्युतिकरणको काम अघि बढेको छ । विकास निर्माण भनेको सबै सरकारको पहलमा मात्रै काम हुन सक्छ । हामी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा हामी दुई तिहाईमा छौँ । तर दुभाग्र्यवस हामी विगतमा फरक–फरक हुँदा हाम्रो सरकार रहेन् ।
यो अढाई वर्षमा फाल्गुनन्दमा सरकारले के ग¥यो ? हामीले हेर्नुपर्छ । काँग्रेसले जितेका स्थानीय तहहरु भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् । कमिसन र भ्रष्टाचारको खेलमा लागेका छन् । यसको अन्त्य अत्यावाश्यक भइसकेको छ ।